Xaafadaha Waaberi iyo Biyo kule oo caawa guulo ka gaaray tartanka Kediska SBC – SBC
Xaafadaha Waaberi iyo Biyo kule oo caawa guulo ka gaaray tartanka Kediska SBC
Posted by editor on August 10, 2011 Comments
Caawa waxaa qeybtii hore Fooda isku daray Tartanka xaafadaha kala ah Cakaara oo Xingalool ka tirsan iyo Xaafada Waaberi oo garoowe ah.
Waxaa dhexmaray labadaasi xaafadood tartan aqooneed aad u xiisobadan, waxaana ay ugu dambeyntii ku soo dhamaatay oo ayna guushu raacday xaafada Waaberi iyadoo la timi dhibco dhan 11, halka xaafada Cakaara ay la timo 8 dhibic
Waxaa sidoo kale caawa wada tartarmay labada xaafadood ee kale, oo kala ahaa xaafada Biyo Kulule Boosaaso iyo Xaafada Raxiis Boosaaso.
Labadaasi xaafadood ayaa soo bandhigay tartan xiiso leh, waxaana ugu dambeyntii tartankooda labadaasi xaafadood uu ku soo dhamaaday guushiina ay ku raacday xaafada Biyo Kulule Boosaaso iyadoo la timi dhibco dhan 11 halka ay Hoseed Garoowe ay la timi 10 Dhibic.
Wareegani waa wareegii labaad ee is araga Xaafadaha.
Noo kala sheeg labada xaafadood ee ugu danbeeya ma laba xafadood oo isla bosasaabaa mise waa bosaaso iyo gorowe